Izindaba - Ungayikhetha kanjani indwangu yesudi ye-TR?
Akunandaba ukuthi imfundamakhwela noma ikhasimende elijwayelekile elenziwe ngezifiso izikhathi eziningi, kuzothatha umzamo othile ukukhetha indwangu. Ngisho nangemva kokukhetha ngokucophelela nokuzimisela, kuhlale kunokungaqiniseki okuthile. Nazi izizathu eziyinhloko:
Okokuqala, kunzima ukucabanga ngomphumela wengubo isiyonke ngendwangu yesayizi yendwangu;
Isizathu sesibili ukuthi izindlela ezahlukahlukene zokweluka indwangu kanye nemingcele ehlukahlukene kaningi ziletha ukuthungwa okwehlukile kwezingubo.
Ukuze uxazulule inkinga yokukhetha indwangu, indatshana yanamuhla izocacisa imininingwane oyidingayo ukuze uyinake lapho ukhetha indwangu. Ukuqonda okuncane kungasetshenziswa njengeqhinga elincane.
Indwangu yesisindo segremu yendwangu
Inombolo yelebula elenzelwe izindwangu, kungenzeka ingabeki umucu wendwangu eluka, kepha kufanele imakwe ngo-g wayo, kusukela ekusebenzeni okusebenzayo, igramu kunentambo yokwaluka ingadlala "ikhwalithi" ethe xaxa yendwangu, ikhwalithi igqoke izinkathi, ezihlukile isisindo segremu ukuthi yiziphi izingubo zonyaka ezenza ukusabela okuqondile okusetshenziselwe kona, ngakho-ke kudingeka wazise isivakashi kabanzi.Lisho ukuthini lelo gramu? Uma sikhuluma iqiniso, kubhekiselwa kusisindo semitha eyodwa yendwangu, enquma ngqo inani loboya futhi kuthinta imfudumalo. Uma uyiqonda ngendlela ejwayelekile, ungakuthatha njengobukhulu bendwangu. Ukuphakama kwegremu lendwangu embi kakhulu, indwangu iyajiya, bese kuthi igremu yehle, indwangu iba mncane.
Izindwangu zamakhophi amaningi ezimpawu zesitolo ezinkulu zamakhophi ayo yonke indwangu ka-g ayafana, kunabambalwa abazoba negramu ehlukene yokubopha ndawonye, ​​kepha ngokuyisisekelo ngeke kuphume indwangu yasehlobo nasebusika ebopha incwadi, ngakho-ke sikhetha indwangu, ikhasi lakho lokuqala lokufika, bheka inombolo yendwangu isisindo segremu kulwazi lwelebula, ijwayele ukuba yingcweti.
Ngalesi sikhathi umhlangano othile othile ofuna ukuwubuza, isisindo samagremu ehlukene sihambisana ngasiphi isikhathi, umehluko omkhulu? Lowo umehluko omkhulu!
1. Ntwasahlobo / Ehlobo
Ububanzi besisindo segramu bungama-gramu angama-200 ~ 250 amagremu noma kunjalo (ngibonile indwangu yesudi enesisindo esiphansi kakhulu segramu ingu-160 amagremu, kepha imvamisa i-180 gram ingaphansi ngezansi), ibalwa njengezindwangu zasentwasahlobo / zasehlobo. Njengalolu hlobo lwendwangu elula nelizacile, ezindaweni ezinelanga, uma ubheka ilanga, kuzoba sobala kancane, kepha ukugqoka emzimbeni ngeke kungene. Lolu hlobo lwendwangu lunokuphefumula okuhle komoya nokushiswa okusheshayo kokushisa, kepha kufushane ngokuqonda, ngezinga eliphansi lokuhleleka nokusebenza okungahambi kahle kombimbi (ezimbalwa zazo zizothuthukisa ukusebenza kokulwa nemibimbi ngemuva kokuqeda okuthile okukhethekile ). Isithombe esingezansi ngama-240 amagremu entwasahlobo / ehlobo.
Ngezansi kunendwangu yesudi engu-240g TR
2. Izinkathi ezine zonyaka
Ububanzi besisindo se-Gram bungamagremu angama-260 ~ 290 amagremu noma kunjalo, kubalwa njengezindwangu zezinkathi ezine zonyaka.Njengoba igama lisho ukuthi, indwangu yezinkathi ezine ezikhuluma ngobukhulu bayo ilingene, ilungele ukugqoka unyaka wonke, isudi enesiphetho umkhiqizo, sivame ukubona uhlobo lwendwangu luvame kakhulu ezinkathini ezine, ezimweni eziningi, izinkathi ezine ezine-drape yendwangu iyona engcono kunazo zonke, ayikho ukukhanya noma iqinile, ngakho-ke izinkathi ezine ezinezindwangu zifanele kakhulu izindwangu zesudi ezihlelekile.
Ngezansi kunendwangu yesudi engu-270g TR
3. Ekwindla / ebusika
Ububanzi besisindo segremu budlula amagremu angama-290 futhi ngokuyisisekelo kubalwa njengezindwangu zasekwindla nasebusika. Abantu abambalwa bajwayele indwangu yamabhulukwe entshonalanga ebusika inezela amaJohns amade, kepha umhlangano ngemuva kokukhulisa ugesi omile uvumela amabhulukwe amathe amunce umlenze, Indwangu yasekwindla / yasebusika lolu hlobo lwesimo ekhetha isisindo esiphakeme inganciphisa inkinga ngezinga elikhulu, futhi ikhuthaze ukusebenza kwemfudumalo ngokusobala.Izici zezindwangu ezinesisindo esiphakeme zingafingqwa ngokuthi: ziqinile, akulula ukusonteka, ukumelana nemibimbi, kulula isibambo, imfudumalo ephezulu.
Okungezansi kukhombisa ifayili le- Indwangu yesudi engu-300-gram TR
Uma ungosomabhizinisi abajwayelekile, izinsuku ezinhlanu ngesonto unyaka wonke zizogqoka isudi, ulwazi kumele lwaziwe, izinga lokushisa lonyaka wonke ngokusho kwedolobha labo, ukunquma isudi ngalinye lilungiselela amasethi amaningi wesizini ehlukile kunengqondo, izingubo zonyaka ezihlukile ngokwehlukana, ukwenziwa kokunambitheka okuhle ngokusebenzisa ikhabethe kuphakeme, kepha ukugqoka ukuzwa okusobala okucacile.
Ungawukhetha kanjani umbala nokuthungwa?
Umbala nokuthungwa kwendwangu kungenzeka kakhulu ukuthi kubangele ikhanda lapho kukhethwa indwangu. Yini okufanele ngiyenze uma ngingenakukwazi ukuyikhetha? Ake siqale sihlaziye ukuthi imibala ehlukene nemigqa ezoba namuphi umphumela ekuhlanganisweni kokugqoka konke, bese sizivumelanisa nezikhathi zokugqoka ngokulandelana. Ngemuva kokuhlaziywa, singaba nomqondo.
Ukujula kwendwangu kunquma ngqo izinga lokuhleleka komcimbi. Uma kumnyama ngokwengeziwe ukuhleleka ngokwengeziwe, okulula lapho kukhululeka kakhudlwana. Ngamanye amagama, uma amasudi agqokwe kuphela emsebenzini nangezinye izikhathi ezihlelekile, izindwangu ezilula zingakhishwa ngokuphelele.Kunqubo yonke yokuhlanganiswa, kunephuzu elingeke langanakwa ukufanisa izicathulo zesikhumba. Umbala wesudi umnyama, kuba lula ukuthenga izicathulo zesikhumba nge-collocation efanele. Ukukhanya kombala wesudi, kuba nzima kakhulu ukufanisa izicathulo zesikhumba.
Iningi labantu eligqoka isudi yisimo esisemthethweni sokugqoka, yithi kusukela ekukhetheni ngombala, ngeke ubalekele omnyama, ompunga, oluhlaza okwesibhakabhaka lezi zinhlobo ezi-3 zombala, imvamisa zidinga ukuqhamuka ezinhlamvini ezahlukene ngalesi sikhathi zinomehluko, ziveze umlingiswa ngamunye .
1. Indwangu enemigqa ekhanyayo
Isudi enemigqa ivame ukuvela ngezikhathi zebhizinisi, noma ayifanele ezinye izindaba zezemfundo nezikahulumeni ngezikhathi ezihlelekile, isikhala esingenantambo esincane ngeke sibe siphezulu kakhulu, kepha singavuleki ngokwejwayelekile, siyisinqumo esihle kubantu abaningi, ububanzi obubanzi bomugqa, umsebenzi wansuku zonke, umphathi uzovame ukugqoka imivimbo ebanzi, uma ungumuntu omusha, indawo yokusebenza ibingacabangi ngomugqa obanzi.
TR suit indwangu ngemivimbo ekhanyayo
2. Indwangu ye-Plaid
Imigqa emnyama nezimpukane ezimnyama ziya ngokuya zanda ngoba abantu bafuna ukugqoka into evumelana nendawo yokusebenza yabo futhi engabukeki njengabo bonke abantu, kodwa akucaci kakhulu. Ngalesi sikhathi, awukwazi ukukubona ukude, kepha ungakubona ngokuningiliziwe okuseduze.Kuzo zonke izinhlobo zokusanhlamvu okumnyama, i-herringbone grain okusanhlamvu okumnyama yiyona ebonakala ivuthiwe, ihlezi, okusho ukuthi, labo abafuna ukugqoka okuncane kungakhishwa ngaphandle, okusanhlamvu kwenani lokukhanya nomthunzi ku-luster okumbalwa, okuvame ukuvela kalula futhi kumfashini.
Igridi TR isudi indwangu
3. Indwangu yeHeringbone
Izinhlamvu ze-Herringbone (ezaziwa nangokuthi i-fishbone grain) ngokuvamile azicaci, uma abantu bema amamitha ama-2 ukusuka kokujwayelekile kungabonakali.
Ngakho-ke kuphephile kubantu abangafuni ukugqoka kakhulu, kepha abakwazi ukwenza ihaba.
Indlela enganakwa yokweluka
Izici zendwangu yezindwangu ezahlukahlukene zokuluka zinokwehluka, okunye ukucwebezela okuhle, yize abanye bengacwebezeli ukumelana nemibimbi kungcono, abanye beluka kunwebeka kangcono, lapho sazi ukuthi ukuthungwa okungafani, okuyindwangu ecace kakhudlwana kufanelekile ngokwabo , kanye namaphuzu wolwazi ayisihluthulelo, kuvame ukunganakwa abantu abaningi.
1. Twill aluka
Le ngenye yezindlela ezinkulu zokuthengisa indwangu yesudi. Ukusebenza konke kuzinzile, ngaphandle kokuncipha okusobala, kepha futhi ngaphandle kwendawo ekhanyayo ebonakalayo. Uma kukhulunywa ngentambo, uma intambo yendwangu iphezulu, kulula ukuvela icwebezela futhi yehlile. Umfanekiso ongenhla ukhombisa indwangu yombala eqinile, esetshenziswa futhi emigqeni yethu eminingi ejwayelekile nasemaphethini we-plaid.
2. eluka Plain
I-Flat weave izwa inzima futhi iqine, ngakho-ke inokumelana okungcono kombimbi kune-twill, futhi kulula uku-ayina nokuphatha kune-twill, kepha umehluko omkhulu ukuthi awunankazimulo. Amanye amakhasimende athanda izindwangu ze-matte, ngakho-ke le ndlela yokweluka ingukukhetha okungcono.
3. Ukwehlisa iso lenyoni
I-bird 's-eye weave iyethu inconywa njenge-suit yansuku zonke i-weave, ngaphezu komuzwa ovuthayo, cishe zonke izakhiwo ezisele zinhle kakhulu, kungaba ukumelana nemibimbi, ukuqina, ukulenga phansi ukuzwa noma izinga elilawulekayo, ulwazi lwethu ukugqoka isikhathi eside, kutholakale ukuthi inombolo efanayo yokugqoka, ukweluka kwamehlo kwenyoni mancane amathuba okukhombisa endala.
Thanda indwangu yesudi abangane bangalandela iwebhu yethu, ibhulogi kuzoba izibuyekezo ezingajwayelekile.